Top 6 Android App Manager: Manager All ngwa ọdịnala na Your Android effortlessly
Mgbe i nwere na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ị ga-ike na-eche iji wụnye ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala na ya. The ngwa nwere ike ịbụ banyere egwuregwu, Media Player, akwụkwọ ụlọ ahịa, na-elekọta mmadụ, azụmahịa, nke na-eme gị Android ndụ yi na ebube. Otú ọ dị, mgbe ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-aghọ zaa,-agba ọsọ nke gị batrị, ịkpata ngwa ngwa arụmọrụ, eleghị anya ị chọrọ ime ihe na-agbanwe ya. Na nke a, ihe Android ngwa njikwa-aghọ a mkpa, na nke ị nwere ike idebe ihe nile ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị na mbadamba ọma.
Part 1. Gịnị Bụ Android App Manager Part 2. Olee otú Jiri Android App Manager Part 3. Top 5 Alternatives ka Android App Manager Part 4. Desktọpụ App Manager maka Android jikwaa ngwa site PC Part 5. Free Way jikwaa ngwa ọdịnala na akporo ekwentị na Tablet
Part 1. Gịnị Bụ Android App Manager
The Android App Manager bụ ihe Android APK faịlụ, nke na-enyere aka ijikwa niile ngwa arụnyere na gị na Android ekwentị na mbadamba. Ọ nwere ike na-egosi na ị nkọwa banyere ihe ngwa, ngwa ngwa ịchọ ọ bụla ngwa arụnyere, na-enye akụkọ iji gwa unu ihe ugboro ugboro-eji ngwa ọdịnala na ejibeghi ngwa ọdịnala na ndị ọzọ.
Part 2. Olee otú Jiri Android App Manager
Nzọụkwụ 1. Download Android App Manager si Google Play ngwa ahịa na wụnye na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Android App Manager. Na ya ihuenyo, ị pụrụ ịmalite jikwaa ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị, dị ka search, ụdị, ndabere ma ọ bụ weghachi ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị na mbadamba.
Part 3. Top 5 Alternatives ka Android App Manager
E wezụga Android ngwa njikwa, E nwere ọtụtụ ndị ọzọ ngwa ọdịnala nke dose otu ihe ahụ. Na-esonụ akụkụ, m na-aga na-egosi gị Top 5 free uzo ozo ka Android App Manager.
AppMonster Free ndabere Weghachi 4.4 / 5 Free
Ngwa Manager 4.1 / 5 Free
App Manager maka Android 3.9 / 5 Free
1. AppMonster Free ndabere Weghachi
AppMonster Free ndabere Weghachi bụ ihe ngwa manịja Android ekwentị na mbadamba. Ọ nwere ike na-eme ọtụtụ ihe, dị ka ngwa ngwa chọọ ngwa, ụdị ngwa site aha, size na arụnyere ụbọchị na-akpali ngwa SD kaadị. I nwekwara ike ndabere ngwa SD kaadị na nkwado ndabere na mpaghara ahịa njikọ. Mgbe ahụ, otu ụbọchị ị chọrọ weghachi, ị nwere ike ịga SD kaadị ma ọ bụ ahịa iji weghachi ngwa.
Download AppMonster Free ndabere Weghachi si Google Play Store >>
AppMgr, mara dị ka App 2 SD, bụ a jụụ App manịja Android ka eme ka i nwee jikwaa ngwa ọdịnala na mfe na-adaba adaba ụzọ. Ọ na-enye gị ike ịkwaga ngwa esịtidem ma ọ bụ mpụga nchekwa, zoo usoro ngwa site na ngwa ndepụta, ifriizi ngwa ọdịnala na adị na ekwentị gị. Ke adianade do, ọ na-enyere gị ịkọrọ ngwa ọdịnala na ndị enyi, uninstall ngwa ị na-achọghị ka ihe ọ bụla ọzọ, doro anya ngwa caches na-eme ka ụlọ n'ihi na ihe faịlụ. Ọ bụ n'ezie dị mma nke ukwuu, nke na-arụ ọrụ dị ka a amara.
Download AppMgr III (App 2 SD) si Google Play Store >>
3. ngwa Manager
Ngwa Manager dị nnọọ mfe ngwa, nke a na-tumadi ji iji wụnye na iwepụ ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị na mbadamba na-agba ọsọ Android 1.1 na mgbe e mesịrị. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na-enweghị mgbasa ozi. Otú ọ dị, ọ na-apụghị ịmanye ịkwụsị ngwa, doro anya caches, ụdị ngwa ọdịnala na ndị ọzọ.
Download ngwa Manager si Google Play Store >>
App2SD & App Manager-Save Space, na-arụ ọrụ dị ukwuu na na Android ekwentị na mbadamba na-agba ọsọ Android 2.2 ma ọ bụ karịa. Ọ na-egosi na ị na a ndepụta banyere niile arụnyere na usoro ngwa, na-egosiputa ihe ọmụma zuru ezu banyere ihe ọ bụla ngwa, na-ahapụ ị na-akpali ngwa SD kaadị. Mgbe ị na-ụfọdụ ngwa ị na-adịghị eji, ị nwere ike iwepụ ha ma ọ bụ ịmanye igbochi ha ma doo anya na ngwa data na caches. Ọ bụrụ na e na ụfọdụ ngwa ọdịnala na-amasị gị nke ukwuu, ị nwekwara ike ịkọrọ ha na ndị enyi gị. N'ihi na ihe atụmatụ, ị nwere ike ibudata a na ngwa na-enwe a-agbalị.
Download App2SD & App Manager-Save Space si Google Play Store >>
5. App Manager maka Android
App Manager maka Android bụ ihe dị mfe na-eji ngwa, nke-enye gị jikwaa niile arụnyere ngwa ọdịnala na nchekwa na gị Android ekwentị na mbadamba. Ọ na-achịkọta ngwa arụnyere na ekwentị na mpụga ebe nchekwa na a ndepụta, na-enye gị ihe n'ụzọ dị mfe ịchọ gị chọrọ ngwa. E wezụga, ị pụrụ ịkpali ngwa ọdịnala na mpụga ebe nchekwa onwe elu nchekwa ekwentị. Ndị ọzọ na atụmatụ, dị ka iwepu ngwa ọdịnala na-ekpocha caches, ma ọ bụ na-ekere òkè ngwa ọdịnala na ndị ọzọ, eme ka ọ dị mfe maka gị jikwaa ngwa.
Download App Manager maka Android si Google Play Store >>
Part 4. Desktọpụ App Manager maka Android jikwaa ngwa site PC
Na akụkụ 3, m na-agwa gị na n'elu 5 Android App njikwa ọzọ. Otú ọ dị, E nwere ọtụtụ salient desktọọpụ ngwa manịja Android, nke na-ahapụ unu kpọmkwem ijikwa niile ngwa ọdịnala site na kọmputa. N'etiti ha, Wondershare MobileGo for Android guzo. Ọ bụ ihe niile-na-otu Android ngwa njikwa software. Na ya aka, ị nwere ike mfe ibudata, wụnye, uninstall, òkè, na mbupụ Android ngwa, akpali ngwa SD kaadị onwe elu ohere, na nkwado ndabere na mpaghara ngwa data. Ugbu a, na-ahapụ 'nwere anya na otú magburu onwe software bụ!
Ihe niile na-na-otu ngwa manịja Android jikwaa ngwa ọdịnala site na kọmputa effortlessly.
One-pịa ka nkwado ndabere na mpaghara weghachite ngwa ọdịnala na ngwa data.
Download ma wụnye ọ bụla ngwa site Google Play, AppBrain na ndị ọzọ.
Wụnye ọtụtụ ngwa site na kọmputa na-Android ngwaọrụ na oge.
Export ngwa site Android ngwaọrụ PC maka ndabere ma ọ bụ ndị ọzọ na-SD kaadị.
Hichapụ achọghị ngwa ọdịnala na-eme ka ụlọ maka ọkacha mmasị gị faịlụ.
Ekekọrịta ọ bụla ngwa na ndị enyi gị site na Facebook, Twitter na SMS.
-Arụ ọrụ maka Samsung, HTC, LG, Google, Sony, Motorola, Huawei, wdg
Rịba ama: The Mac version anaghị akwado nbudata ma ọ bụ na-ekere òkè ngwa, ma ọ bụ ịkpali ngwa SD kaadị.
Mma 1. Download ngwa site Google Play, AppBrain, wdg
Wondershare MobileGo for Android Nwere wuru na-Google Play echere gị download ọkacha mmasị gị ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ na-eji ngwa nbudata ụlọ ahịa, dị ka AppBraiin, ị nwere ike tinye ya na aka ekpe kọlụm. Dị nnọọ pịa cross icon na-abanye na ngwa website URL na aha.
Mgbe ị na-ahụ gị chọrọ ngwa, ị nwere ike ibudata ya. Wondershare MobileGo for Android Ga na-wụnye ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị na mbadamba.
Njirimara 2. Wụnye, Uninstall, Export, Share na Bugharịa Android égwu
-Aga n'aka ekpe kọlụm na pịa App. Nke a na-elu ngwa management window ke ziri ezi. All ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-egosipụta n'ebe ahụ. Ị nwere ike mfe ego ọ bụla ngwa aha, size, version, nwụnye oge, ụlọ ahịa ebe.
Wụnye App: Pịa Wụnye iji wụnye gị chọrọ ngwa site na kọmputa na batches.
Uninstall égwu: Họrọ gị achọghị ngwa ọdịnala na pịa Uninstall iwepụ ha ngwa ngwa.
Export égwu: Akọrọ ngwa ọdịnala na ị chọrọ mbupụ na pịa Export mbupụ ha na kọmputa.
Bugharịa ngwa SD kaadị: Tinye akà rà na ngwa na pịa Kwafee SD Kaadị ka akpali ya site ekwentị Nchekwa ka SD kaadị.
Share App: Tinye akà rà ọkacha mmasị gị ngwa. Bugharịa ihe òké na ya na pịa òkè icon ịkọrọ ngwa ndị ọzọ site na Facebook, Twitter ma ọ bụ SMS.
Part 5. Free Ụzọ Jikwaa égwu na android ekwentị na Tablet
N'ezie, enweghị ihe ọ bụla-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, ị ka nwere ike jikwaa ngwa Android ekwentị na mbadamba. Dị nnọọ enweta Ntọala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Na ihuenyo, chọta Ngwa faili. Mgbe ahụ, ị nwere ike nwere ike na-ele anatara banyere ihe niile ngwa, ngwa ọdịnala na ị download na ngwa na-agba.
Họrọ otu ndepụta na enweta otu ngwa. Mgbe ahụ, ị pụrụ ime ngwa management site na ịme ọpịpị Force kwụsị kwụsị a na-agba ọsọ na ngwa na Android, tapping Uninstall ka ihichapụ ihe ngwa, ma ọ bụ ịme ọpịpị Doro Anya data onwe elu nchekwa.
> Resource> Android> Top 6 Android App Manager: Manager All égwu na gị android ngwaọrụ effortlessly